'मेरो गुनासो गर्नेजति मरिजाउन्' : केशव स्थापित -
Homeसमाचार‘मेरो गुनासो गर्नेजति मरिजाउन्’ : केशव स्थापित
‘मेरो गुनासो गर्नेजति मरिजाउन्’ : केशव स्थापित
आफूसँग अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउने तयारीमा लागेका छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै स्थापितले अशिष्ट व्यवहार गरेको गुनासो सुनाउँदै उनले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुमतिसमेत मागेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बिहीबार अपराह्न अस्पतालमै पुगेका थिए । उनले स्थापितसँग क्याबिनेटमा काम गर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टसमेत पारेका थिए । यो कुराकानी हामीले दैनिक नया पत्रिका बाट साभार गरेका हौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धेर–थोर काम गरेको भनेर तपाईंलाई चिनिन्छ । त्यही आधारमा पनि होला, प्रदेशको पूर्वाधारमन्त्रीसमेत हुनुभयो । तर, अहिले कामै गर्न नसकेको भनेर हटाउन मुख्यमन्त्रीले तयारी थाल्नुभएको छ । अपेक्षाअनुसार काम गर्न किन सक्नुभएन ?
कर्मचारी आएको केही समय मात्र भयो । कर्मचारी ‘फिल्ड’मा जानै पाएको छैन । अनि कसरी काम हुन्छ ? मुख्यमन्त्रीले राम्रै सोचेर काम किन ढिलो भयो भन्नुभयो । मैले हुँदै छ भनेँ । अब तिहारपछि दनादन काम हुन्छ ।
केही समयअघि तपाईंले नै प्रदेशका मन्त्रीको काम केही भएन, लोखर्के गनेर बसेको छु भन्नुभएको थियो, लोखर्के गनेर बसेपछि काम कसरी होला ? अरू मन्त्रीको पनि चाल उस्तै हो कि फरक छ ?
लोखर्केको कुरा पुरानो भयो, यसको सन्दर्भ अब छैन । अरू मन्त्रीको टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मेरो मन्त्रालयको काम नभएकै हो । कृषिमन्त्रीलाई सजिलो छ होला, यति मल किनेँ, वितरण भो भन्न सजिलो हुन्छ । मेरो काम त बाटो बनाउने हो । त्यसको लागि रिपोर्ट बनाउनुप-यो । टेन्डर आह्वान गर्नुप¥यो ।
त्यसको मूल्यांकन गर्नुप-यो । खसीबाख्रा किनेर वितरण गरेजस्तो त होइन । तर, मैले पनि हचुवाकै भरमा काम गरेँ भने एकजना कर्मचारी जोगिँदैन । मुख्यमन्त्रीको पद पनि जोगिँदैन । राम्रो काम भएन, खत्तम भो, कमसल भो र सडकमा प्वाल प-यो भने ठेकेदार भाग्दैन ? सबै प्रोसेस मिलाउने हो भने समय लाग्छ । मुख्यमन्त्रीको मनसाय खराब होइन, तर किन ढिला भयो भनेर ठूलो स्वरले बोल्नुभयो । मैले पनि ठूलै स्वरले प्रतिवाद गरेँ ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदा–नसकिँदै मुख्यमन्त्रीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो, अपशब्द पनि बोल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ।
उहाँ मसिनो आवाजमा बोल्ने मान्छे, ठूलो स्वरमा बोल्नुभयो । मेरो त आवाजै ठूलो छ, त्यसैले झन् ठूलो स्वरले बोलेँ । तर, यो सब हुँदा क्याबिनेट बैठक सकिएको थियो । सबै एजेन्डामा छलफल भइसकेको थियो । तर, त्यहीबीचमा उहाँले तपाईं कार्यालयमा पनि नबस्ने, तपाईंको पर्फर्मेन्स झुर छ भनेपछि मैले झुर होइन, त्यसरी भन्न मिल्दैन भनेको हुँ । तिहारपछि चार अर्बको टेन्डर हुन्छ, पछि केके हुन्छ, केके हुन्छ । यस्तै भन्ने क्रममा आवाज ठूलोमात्र भएको हो अरु केही भएको होइन ।
तर, मुख्यमन्त्रीले यसलाई असहज रुपमा लिनुभयो ? आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको भनेर कारबाहीको तयारीमा लाग्नुभयो नि ?
छैन, उहाँले त्यस्तो लिनुभएको छैन । त्यो कसरी दुव्र्यवहार हुन सक्छ ?
अस्पतालमै भएका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समेत आजै मुख्यमन्त्री आउनु भएको छ, भेटी पनि सक्नुभयो । तपाईंले भनेजस्तो स्थिति सरल हुन्थ्यो भने यति ठूलो बबन्डर किन हुन्थ्यो ?
त्यो उहाँको विषय भयो । त्यस्तो केही लिनु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यहाँ हामीमात्र छैनौँ, प्रमुख सचिव छन्, सचिव छन्, महिला छन्, मेरा सचिव छन्, एक÷दुईजना पत्रकारहरू पनि देख्या थेँ । अरु पनि मान्छे छन् । गोप्य रुपमै भयो भन्नेजस्तो कुरा आयो । तर, सबैले सुन्नेगरी भएको हो । उहाँले तपाईको ‘जिरो पर्पmर्मेन्स’ भन्नुभयो, त्यस्तो त होइन नि । विमति भएपछि ठूलो स्वरले कराइन्छ । हिजो कराइयो, अलिअलि घाँटी सुकाइयो, सिद्धियो ।
बुधबार बिहान तपाईं र मुख्यमन्त्रीबीच सौहाद्र्धपूर्ण संवाद भएको रहेछ, क्याविनेट बैठकमा तनाव हुने वातावरण कसरी आयो ?
बिहान कुरा भएको हो, सहमति पनि भएको थियो । तर, उहाँले फेरि ‘जिरो पर्पmर्मेन्स’को कुरा गर्नुभयो क्या । बैठकमा मैले १३ जिल्लाको ब्रिफिङ गरेँ । मेरो जिम्मामा १३ अर्ब बजेट छ । एउटै पुलको १० करोड, आठ करोड, पाँच करोड भएपछि १३ अर्बले मैले के काम गरेर देखाउने ? उहाँले तपाईंको काम भएन भन्नुभयो । तैपनि मैले बाटो कसरी बनाउने, पुल कसरी बनाउने, हेटौँडामा के हुँदैछ, राप्तीमा के गर्ने ? हेटौडा जोड्ने ५ वटा बाटो कसरी बनाउने ?
स्रोत कहाँबाट जुटाउने सबै ब्रिफिङ गरेको थिएँ । बैठकको सुरुमा सबै राम्रो कुरा भएको थियो । तर, अन्तिममा फेरि कामै गरेन भनियो । १८ घन्टा काम गर्ने मान्छेलाई कामै गरेन भनेको मिलेन । शैली भएन । तर पनि अरु केही होइन, उहाँले छिटो विकास गरौँ भनेको हो । मैलेचाहिँ प्रक्रियाअनुसार हुन्छ भनेको हुँ । मलाई शंका नगरौँ भनेर अनुरोध गरेको हुँ । पत्रकारजीले पनि यो विषयमा धेरै चर्चा नगरे हुन्छ । केही फाइदा छैन । यस्तो विवाद तपाईंको घरमा नि हुन्छ, मेरो घरमा पनि हुन्छ ।
तर, यो घरायसी विवाद रहेन । मन्त्रीले कुरा गर्दा टेबुल ठोक्नुभो, अपशब्द बोल्नुभो भनेर मुख्यमन्त्रीले नै चित्त दुखाउनुभएको छ । कारबाहीको तयारीमा उत्रिनुभएको छ । त्यसैले यो विषय सामान्य कसरी भयो ?
खै टेबुल ठोकियो कि के गरियो थाहा भएन । उहाँले पनि ठोकेजस्तो लाग्छ । मलाई याद भएन । ठूलो स्वरमा कुरा हुँदा टेबुल ठोकियो कि के गरियो थाहा भएन । यही कुरा लिएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँजस्तो भद्र मान्छले त्यस्तो गर्नुहुन्न । छोराछोरी बद्मास भयो भने बाबुआमाले जिम्मा लिनुपर्छ नि । मेरो ड्रगिस्ट भयो भन्नु मैले सम्हाल्न सकिनँ भनेको हो । त्यसैले उहाँ त्यस्तो काममा लाग्नुहुन्न । उहाँको नेचर पनि होइन ।
त्यो वादविवादपछि मुख्यमन्त्रीसँग तपाईंको संवाद भएको छ कि छैन ?
मैले काम देखाउने हो । घरीघरी सम्वाद गर्ने कुरा होइन । मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीले फोन गरेर घरिघरि मिस यू, लभ यू भनेर सम्झाइरहनुपर्छ र ? काम गर्ने हो, म काममा लागेको छु ।
तपाई एउटा बोलक्कड नेताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । कहिले सिन्धुली गएर समृद्धिको जिम्मा मेरो भयो भन्नुहुन्छ, धादिङ गएर यसलाई सुनको टुक्रा बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, कामको सुरुवात नै भएको छैन । बरु उल्टै ठाउँठाउँमा जग्गाको भाउ बढेको छ भन्ने गुनासो छ नि ?
गुनासो गर्नेजति मरिजाऊन्, मलाई केही मतलब छैन मरिजाऊन् । विकासको सपना बाँडे ठीकै छ नि, जनता उत्साहित हुन्छन् । मैले खुसी बनाउने जनतालाई हो । मेरो कामको कारण कोही डुबेर मर्छ भने मरे भइहाल्यो । त्यस्तो खबर आयो भने डोरी मै पठाइदिउँला । डुबेर मर्नुभन्दा झुन्डेर मरेको राम्रो हुन्छ । होइन भने देशको चिन्ता के हो ? मेरो प्रधानमन्त्री अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, यस्तो वेलामा यस्तो विवाद निकाल्न हुन्छ ? क्याबिनेटमा भएको कुरा पत्रपत्रिकामा छपाएर हिँड्न मिल्छ ? त्यो पार्टीमा कारबाहीको विषय हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई तनाव दिन मिल्छ ? हिजो मलाई चाइना जाने वेला भएको छ, बैठकमा आउन पाउँदिनँ भन्दा बोलाउने, अहिले यस्तो विवाद गर्ने ? यो मिल्दैन । तर पनि मेरो कुनै गुनासो छैन । मेरो टिमको क्याप्टेन उहाँ नै हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा मर्यादाक्रममा पनि केही समस्या छ तपाईंहरूबीचमा ?
मर्यादाको अरु केही थाहा छैन, तिहार पछि हेर्नु न मेरो काम, के हुन्छ ? मर्यादाक्रमको केही विषय छैन । म आइतबार चाइना जाँदै छु, आएपछि काम दनादन हुन्छ ।
‘मि टू’ मुभमेन्टअन्तर्गत दुई महिलाले तपार्इंमाथि आरोप लगाएका छन्, क्याबिनेटमा यो विषयमा पनि चर्चा भयो भन्ने छ नि, खास के चर्चा भयो ?
मैले भनेको हो, यस्तो अफवाहको पछि नलाग्नुस् । मैले ‘मि टु सि टु’ चिनेको छैन । एउटी महिलाले उठाएको हो, उनी जेल जान तयार भए हुन्छ । मेरो अहिले फुर्सद छैन । मेरो प्रधानमन्त्री बिरामी परेको वेला यो इस्यू होइन । मेरो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कामना गर्नु मूल विषय हो । मुलुक बनाउने, जनतालाई खुसी पार्ने पो मुख्य इस्यू हो ।
मिटुको विषयमा मुख्यमन्त्रीले केही सरोकार राख्नुभएको छैन ? केही सरोकार छैन । उहाँ भलाद्मी मान्छे हो, यस्तो विषयमा चासो राख्नुहुन्न । तर, हिजो प्रसंग त आएको रहेछ नि ?
त्यो म आफैँले निकालेको हो । तपाईंहरू आश्वस्त हुनुहोस् है भनेको हो । क्याबिनेटमा आफ्नो भनाइ राख्नुप-यो नि । यस्ता फन्टुस कुरामा उहाँको ध्यान छैन । छिटो काम गरौँ भन्ने उहाँको आसय हो ।
तपाईं मन्त्री जस्तो गरिमा भएको पदमा हुनुहुन्छ । तपाईंले दुर्व्यवहार गर्नुभएको थियो भनेर आरोप लागेपछि तपाईंले र तपाईंको सरकारले औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने त हो नि ?
होइन, त्यो महानगरपालिकाको विषय हो, महानगरपालिकाले दिइसक्यो त्यो विषय नै होइन ।
नियमित पूजा गर्दा कहिले पनि नगर्नुस् यी ७ गल्ति ! हुन सक्छ अनिष्ठ ,लाग्न सक्ला ठूलो पाप !